Howlgalka ayaa lagu qabqabtay qaar ka mid ah samafalayaasha ka howlgala magaalada Jowhar - Axadle - Axadle Wararka Maanta
Jowhar (Axadle) – Booliska Dowlad Goboleedka Hir-shabeelle ayaa howlgalo saacado qaatay waxa ay ka sameeyeen nawaaxiga Hanti-wadaag ee degmada jowhar ee gobolka shabeelaha dhexe, Axadle gobolka.
Sida aan Wararka ku heleyno howlgalka ayaa ciidamada booliska waxa ay ka sameeyeen deegaanada ku hareeraysan maalmo kahor dagaalka, waxaana magaalada lagu qabtay rag looga shakiyay in ay katirsanyihiin maleeshiyada.
Ilo deegaanka ah ayaa sheegay in ciidamada amaanka ay bililiqeysteen guryaha qaar, isla waqtigaas oo ay urursanayeen dad looga shakisan yahay inay ku lug lahaayeen iska hor imaadkii u dhaxeeyay ciidamada amniga iyo dadweyne.
Saraakiisha hogaamineysa howlgalka ayaa ku amray ciidamada amaanka inay gacan bir ah ku qabtaan shaqsiyaadka hubka sharci darrada ah ku haysta magaalada Jowhar si aysan mar dambe u dhicin isku dhacyo sababa dhimasho kala duwan.
Wararkii ugu dambeeyay ee naga soo gaaraya Magaalada Jowhar ee Gobolka Shabellaha Dhexe ayaa sheegaya in halkaasi uu ka dhacay iska hor imaad u dhaxeeyay Ciidamada Maamulka Hirshabeelle iyo Maleeshiyaad deegaanka ah.